Wasiiro booqday xarunta Xalane iyo canshuur laga qaadayo shirkaddaha iyo shaqaalaha ajnabiga ah – MUDUGPOST
You are here: Home Wasiiro booqday xarunta Xalane iyo canshuur laga qaadayo shirkaddaha iyo shaqaalaha ajnabiga ah
Posted on July 7, 2017 by MUDUGPOST | 0 Comments
Wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalintii shalay booqday xarunta Xalane oo ay ka howlgalaa shirkado iyo shaqaale ajnabi ah.
Wasiirrada tagay xarunta Xalane ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka maaliyada C/raxmaan Ducaalle Beylle, wasiirka wasaaradda Warfaafinta C/raxmaan Cumar Cismaan Yariisoow, wasiirka shaqada iyo shaqaallaha Saalax Axmed Jaamac iyo wasiir ku-xigeenno.
‘’Iyadoo laga duulayo baaqii ra’iisal wasaaraha iyo guddi hoosaadka arimaha maaliyada ee ahaa in dhamaanba shirkadaha ka howlgala xarunta Xalane Soomaali iyo Ajnabi intaba lala kulmo, islamarkaana loo cadeeyo in ay waajib ku tahay in ay bixiyaan canshuurihii ku waajibay, ha noqoto canshuuraha shaqaaalaha u shaqeeya iyo macaashka ay faa’iidaan intaba’’ ayuu yiri wasiirka oo sheegay in socdaalkoodu arintaa la xiriiray.
Wasiirka ayaa sheegay in ilaa 157 shirkadood ka howlgalaan sida uu hadalka u dhigay xarunta Xalane.
Xarunta Xalane ayaa ah saldhiga ugu balaaran ee shirkaddaha ajnabiga ah iyo shaqaallaha UNka ka howlgala Soomaaliya, waxaana uu noqonaya kulankan kii ugu horeeyay ee dhaxmara xubno ka tirsan xukuumada Soomaaliya iyo Ajnabiga ku sugan xarunta.
Marar badan ayaa dowladda lagu dhaliilay in aysan ka war qabin howlaha ka socda xarunta Xalane oo dhinaca kale saldhig ballaaran u ah ciidamada howlgalka midowga Africa AMISOM.